बचाउ भनेर चिच्याएपछि बचाउन जाँदा, यी युवाले आफू मरेर अरुलाई बचाए
July 27, 2020 2932
बाँफिकोट गाउँपालिका–५, वडगाउँका २० वर्षीय अनिल घर्तीमा साउन ७ गते छुट्टै उमंग थियो । अन्य दिनभन्दा स’वेरै उठेर उनले गाउँ चहारे । सुतेउनको योजना थियो– स्यार्पुतालमा माछा मा’र्न जाने । वर्षाको समयमा बिहान धेरै माछा मा’र्न सकिन्छ । यसैले पनि अनिल साथीहरुलाई छिटो गर्न भनिरहेका थिए ।
१२/१५ जना साथीहरु भेला भएपछि झोलामा रोटी बोकेर माछा मा र्न स्यार्पुतालको ५ नम्बर वडातर्फको क्षेत्रमा पुगे । स्यार्पुतालमा मिसिने खारखोलामा माछाका आहारा किरा खोज्ने र त्यही तालमा खोला मिसिएको ठाउँ आसपास माछा मा र्ने योजनामा अनिल र उनका साथी’हरु त्यहाँ पुगेका थिए ।
२० वर्षीय अनिल र २३ वर्षीय लोक’बहादुर दाजुभाइका छोरा हुन् । उनीहरुसँगै माछा मा’र्न गएका साथीहरुका अनुसार त्यस दिन स्यार्पुताल पुगेपछि कोही बल्छी थापेर माछा मा’र्न थाले त कोही माछाका आहारा खोज्न थाले ।
स्यार्पुतालमा मिसिने खारखोला वरपर पाइने किरा माछाले खाने भएकाले उनीहरु किरा र गड्यौला खोज्न थाले । कोही ता’लमा पौडी खेल्न थाले ।
उनीहरुसँगै गएका गाउँकै १५ वर्षीय बालक कमल ‘तालमा पौडी खेलिर’हेका थिए । पौडी खेलिरहेका कमल एक्कासी ‘मलाई गाह्रो भयो’ भनेर करा’उन थाले । उनी चिच्याएको सुनेर अनिल ता’लमा पसे । अनिलले कमललाई तानेर तालको किनारतिर ल्याउँदै शशी पुन’लाई जिम्मा लगाए । कमललाई तानेर शशी ताल’बाट निस्किए । तर, अनिल भने निस्किन सकेनन् ।
अनिलले आफूलाई ‘असजिलो भएको’ भन्दै बचाउ भनेर चिच्याएपछि लोकबहादुर अनिललाई बचा’उन तालमै मिसिने खोलामा पसे । खोलासँगै उनी तालमा त पुगे तर अनिललाई भेट्टाउन सकेनन् । धेरैबेर लोक’बहादुरले अनिललाई खोजे ।
तर, न लोकबहादुरले अनिलको उद्दार गर्न सके न आफू नै बाहिर आउन सके । अनिललाई खोज्ने क्रममै लोकबहादुरको पनि ज्या न गयो । लोकबहादुरको श व डुबेको दिन ७ गते नै भेटिएको थियो । ८ गते पोष्टमार्टमपछि उनको दाह’संस्कार गरिएको थियो ।
अनिलको श व १० गते भेटियो । त्यसै दिन पोष्टमार्टमपछि ११ गते उनको दाह संस्कार गरियो । यी दुवै युवा पौडी खेल्न जान्ने र पहिले पनि स्यार्पुतालमा पौडी खेलिसकेका हुन् । तालको ३ नम्बरतर्फबाट पौडिएर ५ नम्बर वडासम्म पुग्न सक्थे उनीहरु । यो दूरी अन्दाजी ४ देखि देखि ५ सय मिटर मानिन्छ ।
‘त्यो दिन के भयो भयो,’ सँगै पौडी खेल्न गएका र कमलको उद्धार’मा अनिललाई सघाएका शशी पुनले भने, ‘अहिलेसम्म म राम्ररी सोच्न, बोल्न सकिरहेको छैन ।’ अनिल र लोक बहादुर फरक–फरक कारणले डु’बेको हुनसक्ने बुझाई उनको छ ।
कमललाई उद्दा’र गर्ने बेलादेखि पौडी खेलिरहेको हुनाले हातखुट्टा गलेर, थाकेर अनिलले असजिलो मानेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । अनिल डुबेको देखेर आत्ति’एर खोलाबाट तालमा हाम्फालेका लोकबहादुर आत्तिएकै कारण समस्यामा परेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । आ’त्तिएर पानीमा हाम्फाल्दा पानी खाने संभावना हुने र त्यसो हुँदा पौडीखेल्न जान्ने मान्छे पनि डुब्नसक्ने उनी बताउँछन् ।
‘म कमललाई उ द्दार गरेर बाहिर निस्कनै लाग्दा बाहिर रहेको एकजना अंकलले, दुवै डु बे भन्नुभयो, पछि फर्केर हेर्दा दुवैलाई देखिनँ,’ उनले भने । अनिल र शशी मिलेर कमलको उद्दार गरेका थिए ।
शशीले कमललाई ताल बाहिरसम्म पुर्‍याउँदै गर्दा अनिलले पनि आफू असजिलोमा परेकाले बचाउनका लागि लोकबहादुरलाई बोलाएका थिए । त्यतिबेलासम्म लोकबहादुर माछा मारि’रहेका थिए ।
शशीका अनुसार खार’खोला मिसिएको र पानी बगिरहेको ठाउँमा नै उनीहरु डुबेका हुन् । लोकबहादुर डुबेको डेढ घण्टामा उनको श’व भेटिएको थियो । (श्रावण ११, २०७७ मा हरि गौतमले कान्तिपुरमा लेखेको यो समाचार यहाँ साभार गरिएको हो)
Prevप्रचण्डले मन्त्री भट्ट लाई भने: ओलीतिरै लाग्ने भए ‘स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री छाड्नु’
Nextदुःखद खबर: आजमात्र कोरोनाबाट नेपालमा तीन जनाको मृ’त्यु
यिनै हुन त्यी शिशुकी आमा ! रुँ’दै आइन् पहिलोपटक मिडियामा (भिडियो हेर्नुहोस्)
आज साउन ४ गते आइतबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
भोलि भदौ २१ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्
कालिञ्चोक भगवतीको जय होस् , हेर्नुहोस् आज शुक्रबारको राशिफल
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (66654)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (66512)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (63441)